Tarehimarika ambony indrindra hatramin’izay…: tao anatin’ny 24 ora, 859 ny tranga vaovao Covid-19 | NewsMada
859!!! Hatramin’ny nisian’ity valanaretina Covid-19 ity tamin’ny taon-dasa, sy ao anatin’izao andiany faharoa izao, io ny tarehimarika ambony indrindra, maneho ny isan’ireo olona tratran’ity valanaretina mahery vaika ity tao anatin’ny iray andro monja. Izany hoe, ny andron’ny alarobia 14 avrily.
Tamin’ny alalan’ny fitiliana miisa 3 284 ny nahitana iotarehimarika io, araka ny tatitra ofisialy nivoaka, omaly. Na ny filoham-pirenena aza, omaly, vaky vava, niaiky izany, nandritra ny fanokafana ireo toeram-pandraisana mararin’ny Covid-19, teny Soamandrakizay sy teny Ankorondrano. Amin’ireo 859 ireo, mbola ny eto amin’ny faritra Analamanga hatrany no be indrindra; 634. Manaraka eo ny faritr’i Sofia; 65 ny faritra Atsinanana; 38… Olona fito kosa ny voalazan’ny tatitra ofisialy fa lavon’ny Covid-19, afakomaly ihany. Izany hoe, efa nahatratra 527 izany izao ireo matin’ity Coronavirus ity hatramin’ny volana marsa 2020.
Olona iray mamindra amin’ny olona telo
Araka izany, hita ho mirongatra andro aman’alina tokoa ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ity. Raha heverina, araka ny fandinihan’ny manampahaizana, fa mety hamindra amin’ny olona telo ny olona iray efa mitondra ny valanaretina, tsy hisalasalana ny filazana fa ho tratra ny 1 000 isan’andro ao anatin’ny roa na telo andro. Indrindra raha tsy misy, na atao antandrevaka, ny fanarahan’ny rehetra ireo fepetra fiarovana. Toa milaza miara-mahita fa na eo aza ireo manam-piniavana mitandrona izany, mbola maro tokoa ireo tsy miraharaha, tsy mivaky loha, na tsy tonga saina akory, eny rehetra eny.
Izao iaraha-mahita sy iaraha-miaina izao koa anefa ny zava-misy ankehitriny. Feno hipoka ary efa tsy maharaka intsony ny hopitaly sy ireo toeram-pandraisana marary. Isan’andro, misy hatrany ireo mamoy ny ainy, ireo marary manana fahasarotana (forme grave). Tsy lazaina intsony ny olana amin’ny tsy fahampiana na tsy fisian’ny fanafody, ny “oxygène”… Eny, hatramin’ny tsy fahampian’ny dokotera sy ireo mpiasan’ny fahasalamana koa aza.
Raha efa mihazakazaka amin’ny fanaovam-bakisiny Covax, avy amin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) ny firenena maro atsy Afrika, anisan’izany ny atsy Nosy Kaomaro, izay efa nahazo daozy an’aliny, mbola tsy nandrenesam-baovao, hatramin’ny omaly ny momba an’i Madagasikara.